Igumbi elinesidlo sakusasa eMakassar nguSwitzerland-Belhotel - I-Airbnb
Igumbi elinesidlo sakusasa eMakassar nguSwitzerland-Belhotel
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSwiss-Belhotel
I-Swiss-Belhotel Makassar iyavuya kwindawo yayo yolwandle kunye nelifa lelifa leMakassar kunye neBugis njengabantu abahamba elwandle kunye nesizwe saselwandle.
Uninzi lwamagumbi ehotele angama-296 abonisa iimbono ze-Makassar strait eziya kuvusa ingcamango yezinto ezintle ze-phinisi schooners ezidumileyo kunye nabasebenzi babo abaye bahamba ngesikhephe ukusuka kweli zibuko kwiinkulungwane ezininzi. Ngoyilo lwayo lwangoku, olutofotofo, indawo esembindini, kunye nezixhobo ezineenkwenkwezi uya kuziva intuthuzelo epheleleyo kunye nokhuseleko lwe-brand yaseSwitzerland-Belhotel yamazwe ngamazwe xa uhlala e-Swiss-Belhotel Makassar.
Amagumbi ayilwe ngononophelo kunye neendawo zikawonke-wonke zibandakanya iimpawu ezimangalisayo zezakhiwo kunye nobuhle bendawo kunye noyilo lwangaphakathi lwangoku kunye nobuchwepheshe bamva nje obulindelwe ngabakhenkethi bale mihla. Indawo yokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa zeyesibini ukuya kokunye kwaye uyilo lonke lwehotele lubeka phambili kwaye lubandakanya iimpawu zokusingqongileyo kwimiba yonke yokusebenza kwayo ngokuchaneka kweSwitzerland.
I-Swiss-Belhotel Makassar iquka amagumbi angama-296 anesitayile, amagumbi eendwendwe anamhlanje kuyilo lwangoku aneentlobo ngeentlobo zamagumbi kunye noqwalaselo ukuze luhambelane neemfuno zomntu wonke. Onke amagumbi eendwendwe ayilwe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zonwabela intuthuzelo kunye nokukhululeka ngexesha lokuhlala kwazo eMakassar.
Ngeentlanganiso ezigqwesileyo kunye neenketho zokutyela, ihotele inikezela ngenkonzo yegumbi leeyure ezingama-24, indawo yokuhlamba impahla kunye nokucoca okomileyo, uqhagamshelo lwe-intanethi ye-Wi-Fi kuwo onke amagumbi kunye neendawo zikawonke-wonke, izibonelelo zeentlanganiso kunye nenkomfa, indawo yokupaka, inkonzo yokupaka i-valet, kunye nokhuseleko lweeyure ezingama-24. CCTV. Imigangatho engatshaywayo iyafumaneka.
Umbuki zindwendwe ngu- Swiss-Belhotel
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Makassar